Bangladesh: Zavamahadomelina, Fananahana, Fahalalahan’ny Asa Fanaovangazety, Voankazon-dririnina, ary Tigatra Mihinana Olona · Global Voices teny Malagasy
Bangladesh: Zavamahadomelina, Fananahana, Fahalalahan'ny Asa Fanaovangazety, Voankazon-dririnina, ary Tigatra Mihinana Olona
Voadika ny 31 Aogositra 2017 20:55 GMT
Toa tsy misy fiafarany ny fidorohana zavamahadomelina raha vao misy firenena iray voagejan'izy io. Tantarain'ny bilaogin'ny Drishtipat Group ny fomba nidiran’ny Yabba, zavamahadomelina mitovy karazana amin’ny “Speed/Amphetamine” avy any Thailandy, tao Bangladesh. Nanomboka taona vitsivitsy lasa izay izy io no nataon’ny kilasy ambony andrana. Avy eo dia niditra lalina tao amin'ny kilasin’ny mpiasa ao amin’ny tanànan'i Dhaka izy io ary loza ny fiantraikany teo amin'ireo tanora.
Miresaka momba ny toetry ny fanabeazana ara-pananahana ao Bangladesh i Captain Chaos ary maneho ny heviny:
Raha mamita-tena ireo Bengalis ôrtôdôksa amin’ny fieritreretana fa ny tsy fanononany ny firaisana ara-nofo amin'ny zanany no mahatonga ireto farany tsy hanao izany, dia miaina ao anaty tontolon'ny nofy izy ireo.
Mipetraka ny tahotra eo amin'ireo mponin'i Bangladesh taorian'ny fanambaràna ireo Fepetra Fampiasan-kery Vonjimaika tamin'ny 25 janoary 2007 izay mametra ny famoahana an-tsoratra na fandefasana an-tsary ny vaovao, ny matoandahatsoratra, ny lahatsoratra, ny sariitatra, ny fandaharana famelabelarana na ny fanaovana adihevitra amin'ny media taratasy na elektrônika ka manohitra ny governemanta, tafiditra anatin'izany ihany koa ny haino amanjery rehetra, anisan'izany ny aterineto, ary mametraka sazy hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina izy ireo raha misy fandikan-dalàna.
Nakatona nandritra ny 12 ora ny pejy fandraisan'ny ‘Bandh Bhanger Awaaj‘, sehatra fanoratana bilaogy Bangla, ny Alakamisy alina tanatinà fanivanan-tena nataon'ny mpanoratra azy, izay niteraka hatezerana teo aminà bilaogera maro. Na izany aza, niverina an-tserasera ihany ilay bilaogy rehefa nahena ireo votoaty voafetra araka ny lalàna. Nisy bilaogera sasany nanokatra bilaogy tao amin'ny blogspot ary nampiasa ny teny Bangla ho fanoherana, ny sasany kosa nivoady hanohy ny fanakianana mba hanatsaràna ny governemanta na dia eo aza ireo famerana. Nitsikera ny hetsika nataon'ny Governemanta Bangladesh ny Kaomity hiarovana ireo mpanao gazety. Saingy tanatinà fifandraisana tamin'ny gazety, nilaza ny mpanolotsain'ny governemanta fa fepetra fanakanana mba hanamarinan-toerana ny lalàna sy hamerenana ny filaminana fotsiny ihany io famerana io ary tsy navoaka noho ny fikasàna hametra ny fahalalahan'ny asa fanaovangazety io didy io.
Manoritsoritra ny fankafizan'ireo mponin'i Bangladesh ny Borois (voankazo) izay tsy hita raha tsy amin'ny vanintaonan-dririnina i Ihtisham Kabir ao amin’ny Back to Bangladesh.
I Mikey Leung avy ao amin'ny Blogging from Bangladesh kosa dia manondro lahatsoratra iray mahafinaritra avy amin'ny Gazetiboky CNN Traveller, mitondra ny lohateny hoe ‘Ireo Tigatra Mihinana Olona avy ao Bangladesh’.
* Sary: Ershad Ahmed avy ao amin'ny Photoblog Dhaka Daily Photo.